KASHIFAAD – Waa Kuma xiddigii ugu adkaa abid ee uu garoonka ku wajahay Antoine Griezmann?? – Gool FM
(Barcelona) 20 Luulyo 2019. Xiddigaha kubadda cagta waxaa mararka qaarkood ay ka shifaan sirahooda waxa ay xiddigaha qaar ay saxaafadda ka hor qiraan xiddigihii ay ku dhibtoodeen in ay garoonka ku wajahaan.
Antoine Griezmann oo ka mid ah liiska 10 xiddig ee koonka ugu wanaagsan dhanka kubadda cagta ayaa waxa mar si kadis ah loo weydiyay xiddigii ugu adkaa ee uu ka hor tago maadaama uu garoonka gudahiisa kula kulmay qaar ka mid ah xdidigaha ugu sarreeya saaxada kubadda cagta.
Ciyaaryahanka reer France ee Antoine Griezmann ayaa ku soo biiray kooxda kubadda cagta Barcelona oo safka kooxdeeda ku soo darsatay xilli wali lagu muransan yahay heshiiska ay kaga soo qateen kooxda Atletico Madrid.
Haddaba waa kee xiddigii ugu adkaa ee uu ka hor tago Antoine Griezmann? Jawaabta uu bixiyey ka daawo Muqalka hoose, waxaana soo jeedinaya warbixintan Wariyaheenna Shaafici Maxamuud Nuur (Shaafinho).